Malgachoscopie – Fantatro izay fihaviako – Malag@sy Miray
Toy izao ny fivakin’ny lalàna laharana 60-064 tamin’ny 22 Jolay 1960 mikasika ny zom-pirenena Malagasy :
« And. 9 – Dia Malagasy :
1° Ny zanaka an-tokantrano izay Malagasy ny rainy;
2° Ny zanaka an-tokantrano izay Malagasy ny reniny ary tsy manam-jom-piaviana na tsy fantatra izay zo fiavian’ny rainy … »
« Malagasy Ikaky, Malagasy i Neny mazava ho azy fa Malagasy aho izany. » Eo am-pamakiana ny tohin’io lalàna io aho … dia tsy azoazoko ny aiko, « Malagasy an-taratasy aho fa inona sisa no mbola Malagasy amiko ? »
Araky ny mahazatra ahy amin’ny fotoana toy izao dia tanisaiko avokoa ireo fahatsiarovana izay tehiriziko ao anatiko ao. Ny tsikin’Ikaky, ny halefaky ny tànan’i Neny, ireo angano fitantaran’i Nenibe … Niahotra aho ny hanohy, voalohany izao no tsikaritro fa olona efa nodimandry avokoa no tanisaiko, tantara efa lasa amam-polontaonany maro.
Hatreo dia nanomboka nisalasala ireo fahatsiarovako aho. « Ny làlan-tery mody any an-tanàna, sao dia mba efa vita tara kosa izy amin’izao ? Ny tokotanibe filalaovan’ny ankizy raha diavolana, sao nosoloin’ny fivarotan-tsolika ? Ny diavolana aza, ahiako ho lanian’ireo ankizy eo am-pijerevana fahita-lavitra ? »
Teo am-pieritreretana aho dia nampahery tena, « Malagasy aho ary fantatro tsara ny tanànanay ! » Tsy tony naharitra anefa aho fa miverimberina ato an-tsaiko hatrany ilay fanontaniana, « Inona sisa no mbola Malagasy amiko ? Ny lelako efa miraikitra, ireo olom-pantatro efa lasan-ko razana, ireo fahatsiarovako antitra, ireo angano sy ohabolana zary hadinoko … »
Rehefa nandini-tena aho dia hitako mifahatra lalina tao anatiko ilay valim-panontaniana, « hody malama vava toy ny fahiny aho raha tonga any Madagasikara. » Torak’izany koa ny olom-pantatra, hahalala olona hafa vaovao aho. Ny tanananay halaiko sary sao dia mbola hiova indray. Ary itondrako PS3 ireo ankizy hilalaovany …
Nanomboka teo dia tsy mila nofaharako tamin’ireo fahatsiarovako intsony ny maha-Malagasy ahy satria fantatro izay fihaviako, ary « Tompon-trano aho, tompon-tany, ka tsy very raha mody. »
vakio ny tohiny « Malgachoscopie – Ny fodiako » >>
17 novembre 2006 à 13:41
Mahafinaritra ilay soratrao. Be fanontanina kosa, toa izaho alohan’nodiako tamin’ny aprily lasa teo. telo taona tsy nodina.
Le temps passe vite et il est normal que les choses, l’évolution ou son contraire, n’attendent pas. Mais il reste définitivement une réelle différence entre retrouver un endroit connu et retrouver les lieux de son pays.
Tout en restant avec un maximum de contacts pourtant, 3 ans ont suffi pour que je me sente larguée par ce qui a changé. Car tout ne stagne pas non plus…
Par contre je comprends ton incompréhension et peut-être ta colère d’être distingué par les propres tiens au point d’avoir besoin d’un visa. Pour rentrer dans son propre pays… C’est aberrant en effet. Fa ny karam-panondro koa mandaitra ka, izay no nataoko farany teo satria adinoko ny pasipaoroko (vendrana e? tsy diso). Ka tsy fampiasa isanandro kosa ary ko! 🙂
Fa na izany na tsy izany ary, tsy misy manadino izay tanindrazany… Na aiza na avy aiza.
En tout cas, merci à toi 😉
17 novembre 2006 à 20:09
Manao ahoana i Tomavana,
Lina dia lina aho mamaky ny lahatsoratrao sy ny fihetsehamponao. Raha izaho manokana aloha dia mbola tsy namisavisa lalina loatra an’ilay fanontaniana hoe : Inona moa no mbola maha Malagasy ahy? Mbola tsy dia ela nipetrahana taty andafy moa ka tsy dia tena namakafaka be loatra an’ilay fanontaniana.
Ity bilaoginao ity dia anisan’ny porofo mazava fa tsy ny taratasinao ihany no malagasy aminao 🙂
17 novembre 2006 à 20:55
@ Tattum Raha tsy mitandrina indraindray dia mety afangaro ny ratsy atao sy ny ratsy midona [la mal commis et le mal subi]. Indraindray ireo ‘circonstances’ samihafa amin’ny fiainana dia mitondra ny tsirairay any amin’ny tsy nampoiziny, izany hoe tsy nofidiny ! Tsy azo ovana ny anefa tantara na ikipiam-maso fa kosa atrehina mivantana tsara [regarder en face].
@ Nivo Misaotra betsaka tamin’ny famangianao sy ireo teny mamy.
Ohatry ny fanontaniana ‘existentiel’ rehetra dia tsy safidiko ny nametraka io fanontaniana io voalohany fa ny hafa no n-‘interpeller’ ahy. Na izany na tsy izany amiko tsy fanontaniana mihidy ny momba io ‘identité’ io fa misokatra, ka mivelatra sy mivoatra manaraka ny fotoana sy ny tantara izay valiny. Misy anefa FOTOTRA tsy mba miova.
17 novembre 2006 à 21:50
« Misy anefa FOTOTRA tsy mba miova. » Tena marina tokoa an’ie izany. Inona nehefan’ tena Fototra ? :)….African-american have been struggling with this definition for centuries now. Language, ethnic group, education….?
17 novembre 2006 à 23:16
Samy mitahiry izay fototra ao anatiny ny tsirairay. Samihafa hatrany anefa io fototra io satria tokana tsy manan-tsahala isika tsirairay avy. Lany andro eo raha hitady marimaritra iraisana 😉
Izay no fahazahoako ilay dikanteny ny ‘identité’ hoe « maha-izy azy » [son unicité ? l’essence même de son être ?]
4 mars 2008 à 0:19
misy fiteny 2 mahery tiako mba hasian-teny kely ireto:
– Malagasy manao an’i Madagasikara maty vao Ramalala
– Malagasy manao an’i Madagasikara fitia varavarana tiana kenefa atositosika
Ny lohatenin’ny resaka dia hoe: « Fantatro izay fihaviako»
Mety hisy hilaza angamba aho hoe « mahasahy koa ilay ramatoa ity » na « mba kevoka koa izy izany » !
Tsy maninona fa ambarako etona fa « TENA FANTATRO ary KOLOKOLOIKO NY FIHAVIAKO »
– Anisany nilofosan’i papako (izay mbola velonasy tomady) sy i mamako (izay vao lasana nandao anay 5 volana izay) ny nampianatra anay iray tampo rehetra indrindra fa izahay vehivavy ny momba an’i Madagasikara, ny momba ireo razam-benay sns…
– Ho gaga ianao fa miantso ny ray aman-dreninay hoe « pap sy mam » izahay ary manao azy ireo hoe: « Tompoko sy ianao » .
Ireo raibe sy renibenay kosa dia antsoinay hoe: dadabe, sy nenibe na bebe !
– Momba an’i Madagasikara: tsy mitsahatra hatramin’izao ny mitantara aminay ireo zava-niainany fony zaza tamin’ny ady lehibe 1945/47 tany Mananjary, Manakara ny papanay ka miakatra any amin’ny tantara napetraky ny iray tampo aminy sy ireo ray aman-dreniny.
– Tsy mijanona ny mitety an’i Madagasikara izahay mianakavy
dia atoriny ny hazo, biby maro karazana manodidina anay !
Anisany nahatonga ahy tia manadiady sy mandeha tsy mijanona toerana iray io ary nianatra ny « Tantara sy zeografian’i Madagasikara » no niafarany !
– Noho ireo asa aman’andraikitra dia mieli-patrana eran’i Madagasikara miala avy eo Antananarivo ireo havanay: Manao dabokandro miompy sy mivarotra omby, miopy zana-dandy sy manao lamba mena koa:
– Ambohimahasoa, Fianarantsoa, Ankaramena, Ambalavao, Sandrandahy sns…
Ankehitriny dia toa efa elabe izahay no lasana aty ampita kanefa tsy tapaka mifanerasera an-taroby amin’ireo havana any Madagasikara koa mahazo vaovao tsy tapaka ! Ny ray aman-dreny koa mivezivezy eo tsy tapaka !
– Ny teny gasy tsy tapaka ary ny ankizy hitenenana teny gasy isan’andro hatraminy vao teraka. Tsy mety miteny gasy izy ireo raha tsy amin’izy samy iray tampo ihany rehefa tiany tsy ho fantatry ny ankizy ny lazainy !
– Ny zavatra ilofosanay ray aman-dreny izao dia mampita ireo zava-drehetra nolazain’ny ray aman-dreninay, sy ny renibenay !
– Ao aminay ny vehivavy dia mitana toerana lehibe amin’ny fampitana ny zava-nisy amin’ny ankizy ! Ary ny papanay no nisolo toerana ireo reniny sy renibeny satria kamboty izy !
Fa anjarako no mitahiry sy mampita izay zavatra lazainy amiko.
Ny ankizy koa manamora ny asa satria MAMETRA-PANONTANIANA foana izy ireo.
– Dia tiana ve i Madagasikara kanefa atositosika e ?
– Maty ve vao Ramalala ?
Tsia, filazan’ny mpijery aty ivelany ihany izany !
Ary na any Madagasikara, na etsy Afrika, na lavitra any Rosia sns… dia tsy maintsy miverina any Madagasikara ny Malagasy rahefa maty ! Satria ratsy be izany « Gasy very faty » izany sady ny fasan-drazana ve ilaozana e ?
FIAVIANA : misy andraikitry ny ray aman-dreny goavana be ao amin’ny fampahafantarana ny toeram-piaviana sy ny fomban-drazana rehetra manomboka amin’ny miteny ny tenindrazana !
Izaho koa nanao « tompoko » marina any ray aman-dreny, hatramin’ny 15 taona teo 🙂
Mafinaritra, misaotra anao.